Hery Rajaonarimampianina Nosy Be : Hiasa ho an’ ny fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina Nosy Be : Hiasa ho an’ ny fampandrosoana
29/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny tafatafa niarahan’ny filoham pirenena tamin ireo tompon’ andraikitry ny tanànan’ i Nosy Be izay nitsena azy teo am-pahatongavana sy araka ny vaovao izay nangonin ireo tompon’ andraikitry ny serasera ny fiadidiana ny repoblika dia fantatra fa nanambara ny Filoha fa mendrika ny fampandrosoana ny tanànan’i Nosy Be. Nambarany tamin’ izany fa efa maro ny asa efa vita sy natomboka eo amin’ izay fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna izay, ka anisan’izany ny tanànan’ i Nosy Be. Efa tanteraka, hoy izy, ny fanamboaran dalana sy ny fotodrafitrasa maro, ary an-dalana ihany koa izao ny fanatsarana ny seranam-piaramanidin’i Nosy Be izay mirazotra amin’ny fanamboarana seranam-piaramanidina ao Ivato. Nambaran’ny Filoham-pirenena ihany koa araka ny fampitam-baovao azo fa “mbola tsy vita ny asa, mitohy ny asa ary mbola betsaka ny asa”.
Tsy nisorona rahateo ny Filoha nilaza fa tsy mijanona hatreo ny asa izay hotanterahina ary mitohy hatrany izany. Raha i Nosy Be manokana, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, dia mendrika hanatanterahana fotodrafitrasa goavana. Ny antony, hoy izy, dia tanàna azo atao taratra filamatra eo amin’ny lafiny fampandrosoana, ary tsy adino ny lafiny fizahan-tany. Ho an’ ny anio ohatra dia hisy ny fijerena ny fanombohan’ ny asa amin’ny fanatsarana ny seranam- piaramanidina ao Nosy Be sy ny fanokanana ihany koa ny ivontoerana fikarakarana ny tanora zazavavy izay niharan’ny herisetra.
Momba ny fandravana ny governemanta: Ny andininy faha-4, ao anatin’ilay fanapahana laharana 18-HCC/D3 tamin’ny 25 mey 2018, momba ilay fitoriana ny fanesorana ny Filoham-pirenena amin’ny asany, dia mazava fa “ ny filoham-pirenena no manana fahefana ...Tohiny